General Knowledge Quiz အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（8.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် General Knowledge Quiz : World GK Quiz App
အသိပညာအာဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာကြီးကိုစွမ်းအင်ကမင်းကို Excel ။
ဒီယေဘူယျဗဟုသုတပဟေ qu ိ: World GK ပဟေ app app app သည်သင့်အားအလားတူပြုလုပ်ရန်ကူညီသည်။ ဤအခမဲ့ GK ပဟေ app ိပက္ခသို့မဟုတ်ဗဟုသုတအက်ပလီကေးရှင်း၏မေးခွန်းထုတ်စရာမေးခွန်းများသည်ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်သောလူများ၏ယေဘုယျဗဟုသုတကိုတိုးတက်စေသည်။
ဒီကမ္ဘာ့အထွေထွေဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗဟုသုတ app က GK မှာ gk မှာရှိတဲ့ချွန်ထက်နေပြီး, ဒီအပြိုင်အဆိုင်ကမ္ဘာမှာအောင်မြင်ပါ။
သင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဗဟုသုတသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးချနိုင်သည်။ သို့သော်ဤ GK အက်ပလီကေးရှင်းများသည်သင်၏အထွေထွေဗဟုသုတများကိုအလွယ်တကူမြန်ဆန်စွာတိုးတက်စေရန်ကူညီသည်။
ဤအသုံးပြုသူအတွက်ဖော်ရွေသောပဟေ qu ိသက္ကာသည်သင့်အား GK မေးခွန်းများအားလုံးကိုဖြေဆိုရန်ကူညီသည် GK ပဟေ qu ိအဖြေများကိုတိုက်ရိုက်ပေးသည်။
အကယ်. သင်သည်အထွေထွေဗဟုသုတပဟေ in ိပက္ခတွင်တောက်ပသောလူတစ် ဦး ဖြစ်လိုပါကမေးခွန်းတစ်ခုစီကို4ခုဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ကူညီပေးပါ သင်၏ ဦး နှောက်ကိုစူးရှသောရွေးချယ်စရာများ။
လူတို့၏ဘ0တွင် GK မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကအရေးကြီးသည့်အကြောင်းရင်းများမှာဤ GK app သည်အခြားသူများနှင့်စကားပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းစွမ်းရည်များတိုးတက်စေရန်ကူညီသည် ။
ဒီ GK ဂိမ်းများတွင်ပါ0င်သည် World အထွေထွေဗျူဟာဗဟုသုတခေါင်းစဉ်များကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများအပေါ် အခြေခံ. မေးခွန်းများ Lurter, History, Geography စသည်တို့,
ဤ GK ပဟေ app ိပက္ခတွင်အဖြေများဖြင့်အထွေထွေဗီတိမေးခွန်းများ 30 ခုပါ0င်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သင်၏ဗဟုသုတကိုစမ်းသပ်ရန်ဗဟုသုတမေးခွန်းများ
သင်၏ GK မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများမှတစ်ဆင့်သင်၏ gk ကို refresh လုပ်ရန်သင်စမ်းသပ်မှုကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သင်၏ဗဟုသုတတိုးတက်စေရန်အတွက်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ် gk စမ်းသပ်မှု
အော့ဖ်လိုင်း mode တွင် Quiz မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုသင်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။
သင် quize app ကိုအခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပါသလား။
Social Mode မှတစ်ဆင့်ဤ GK Test app ကိုသင်ဤအထွေထွေဗဟုသုတအက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်ဝေမျှနိုင်သည်။
BR> ဤကလေးများပဟေ qu ိပက္စအက်ပ်အက်ပလီကေးရှင်းသည်အခမဲ့ app တစ်ခုဖြစ်ပြီးဤ GK ပဟေ app ပဟေ app ပဟေ app app တွင်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော interface တစ်ခုရှိသည်။ GK app တွင် GK app တွင်ပါ0င်သည်။ br> 🎰ပြက္ခဒိန်ပဟေ qu ိ
🗽အံ့ဖွယ်အမှုများ World Quiz
quiz Music Quiz
စာအုပ်များနှင့်စာရေးဆရာများစာပဟေ quiz quiz
do food and Dialogs Quiz
🗿သမိုင်းမှတ်တမ်းများ quiz သမိုင်းကြောင်းနေရာများ quiz အမျိုးသားသင်္ကေတ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးပဟေ qu ိ
💡ရူပဗေဒပညာရှင်များ quiz Placs quirgr. 🎇 Plance Sign Infr> quiz အားကစားပဟေ int ိ
🏀 Plager နှင့်ဂိမ်းများ
technip ား။ Quiz
ဤပဟေ es ိအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်ဤကြီးမားသောအခြေခံ gk စုဆောင်းမှုကြီးမားသောစုဆောင်းမှုနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခြင်းကသင့်အားပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဆွတ်ရန်ကူညီသည် အလွယ်တကူစစ်ဆေးသည်။
ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခမဲ့အတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဤ GK ပဟေ and ိပက္ခများနှင့်အသိပညာပေးအက်ပ်ကိုအသုံးချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်နောက်ဆုံးသတင်းများသည်အင်္ဂလိပ်နှင့်ဟိန္ဒူ GK ပဟေ qu ိပက္ခအတွက်သီးခြားအမျိုးအစားများဖြစ်ပြီး,
Amazing Facts Quiz | General Knowledge Questions and Answers | Fun Facts Quiz 2021| Fun Fact Trivia
The World’s Best Luxury Watch Brands Logo Quiz, General Knowledge Quiz With Multiple Choice (Part 1)
General Knowledge Quiz|| Test # 4|| World GK Test in English
Commerce Lecturer Online